Vashandisi veApple Watch muJapan vane dambudziko nyowani reChiitiko | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti mune iyi Apple Apple haidi iyo «Yemitambo Zuva Dambudziko« Dambudziko idzva reBasa revashandisi veApple Watch rinobuda muJapan. Neizvo vazhinji vedu tinofarira rudzi urwu rwezvinetso zvisina kujairika uye hatizokwanisi kuzviita.
Mune ino kesi iri nyore kupokana nayo iyo vashandisi veApple smart wachi vachakwanisa kuhwina bheji reawa uye zvimiti zvemameseji. Zviripachena kuti zvakanakisa zvematambudziko aya ndezvekuti zvinotikurudzira kufamba uye avo vanotanga nekurovedza muviri vanogona kutokona kufamba kana hafu yeawa pazuva, chimwe chinhu chinobatsira hutano hwedu.
Dambudziko rekupedzisira reApple rakanangana nemapaki emunyika. Pachiitiko ichocho chakatangwa pasi rese uye zvaive zvekupedzisa kudzidziswa kweanosvika 4,8 makiromita muna Nyamavhuvhu 25, mune iyi dambudziko iri rakapfava uye rine kuita ingangoita maminetsi makumi matatu ekurovedza muviri panguva yaGumiguru anotevera.
Zuva rese, vashandisi muJapan (muchimiro chete kwavari) vanozokwanisa kuita chiitiko ichi chakarongeka kupemberera Zuva reMitambo neHutano. Chero zvazvingaitika, kana dambudziko iri rikasvika kune dzimwe nyika, tichazviona zvichiratidzwa muChiitiko application pane yedu iPhone mukati meAward tab. Parizvino isu tinoda dhizaini yezvinamirwa uye zvingave zvinofadza chaizvo kuita chiitiko ichi muna Gumiguru 14 kutitorera imwe menduru yekuunganidza. Iwe unowanzoita zvinetswa zverudzi urwu kana Apple zvikavaisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Vashandisi veApple Watch muJapan vane dambudziko nyowani reChiitiko